Ijazi lemvula-i-PVC ijazi lemvula
Ijazi lemvula-PU ijazi lemvula
Izembatho zemvula-u-Eva Peva Ijazi lemvula
Izembatho zemvula-i-PVC / i-Polyester Raincoat
I-poncho yezingubo zemvula
I-COVID-19 yenze abantu badinga isikhwama somzimba esithe xaxa
Ongoti bezokongiwa kwemvelo bathi ukuhweba ngezilwane zasendle kunganqanyulwa kakhulu ngemuva kokuba ubhadane lwe-coronavirus seluphelile. Bathi kungenzeka ukuthi leli gciwane liqale emakethe ethengisa izilwane zasendle eChina. Leli gciwane laqhamuka kwilulwane noma esilwaneni okuthiwa i-pangolin. Yabe sewelela ku ...
I-COVID-19 yenze abantu abaningi bagqoka ingubo yokuzihlukanisa
Ukusabalala kwe-COVID-19 coronavirus sekwenze abantu abaningi bagqoke ingubo yokuzihlukanisa nezandla zabo, iShijiazhuang tidy fashion co.ltd ikhiqiza ingubo yokuzihlukanisa. Okokusebenza yi-CPE. izinkundla zokuxhumana zibika ukuthi bayanda abantu abagqoke ingubo yokuzihlukanisa futhi abageza izandla ...
Inkampani yethu ekhethekile kuma-raincoat ahlukahlukene nemvula poncho enyakatho neChina, imikhiqizo yethu ithunyelwa eSwitzerland. I-China-Switzerland FTA, eyeke amanani amaningi ezimpahla, iqale ukusebenza ngoJulayi 2014. Ukuhwebelana kwamazwe womabili kuye kwanda kakhulu selokhu kwaqaliswa ...
Cha.151 Zhongshan entshonalanga Road, Shijiazhuang, China